ယုဝတီဂျင်းဖောမယ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ယုဝတီဂျင်းဖောမယ်သည် ယုဝတီဂျာနယ်၏ အမြင့်ဆုံး သောယုဝတီဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ကချင်ပြည်နယ် အလှမယ်ပြိုင်ပွဲ၌ ရရှိခဲ့သော ဂျင်းဖောမယ်ဘွဲ့ကို ကလောင်အမည်အဖြစ် အယ်ဒီတာများက ဓာတ်ပုံနှင့်တကွ ဖော်ပြပေးခဲ့သဖြင့် ကလောင်အမည် ဂျင်းဖောမယ် ဖြစ်ခဲ့သည်။
(1927-04-15) ဧပြီ ၁၅၊ ၁၉၂၇ (အသက် ၉၄)
ဇွန် ၇၊ ၂၀၀၃(2003-06-07) (အသက် ၇၆)
ဂျင်းဖောမယ်၊ နန်းမိုးခမ်း၊ စတယ်လာတင့်
အမျိုးသား စာပေဆု (၁၉၆၃)
၂.၁ ရေးသားပြုစုခဲ့သော စာအုပ်များ
၄ ရရှိခဲ့သော ဆုများ
ယုဝတီဂျင်းဖောမယ်ကို ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ နမ္မတူမြို့၊ ပန်ဟိုက်ရပ်တွင် အဖ ဦးဆန်းမောင် (သိန္နီအမတ်ချုပ်) နှင့် အမိ ဒေါ်ခမ်းလှတို့မှ ၁၉၂၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၁၅)ရက် (မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၈၈ ခု၊ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း ၁၄ရက်)သောကြာနေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ သားသမီးသုံးယောက်အနက် အလတ်ဖြစ်သည်။ အမည်ရင်းမှာ ဒေါ်ခင်ဘုန်းတင့် ဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ်က သာသနာပြု ကျောင်းများတွင် ပညာဆည်းပူးခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ဆယ်တန်း အောင်မြင်သည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ကချင်ပြည်နယ် အလှမယ်ပြိုင်ပွဲတွင် ဂျင်းဖောမယ်ဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။
၁၉၄၈ ခုနှစ်မှ စ၍ စာပေနယ်သို့ စတင် ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်မှာပင် တိုင်းရင်းသူဂျာနယ်၊ ဆောင်းပါး ပြိုင်ပွဲတွင် စတယ်လာတင့် ကလောင်အမည်ဖြင့် ကိုညို့ကို ကျွန်မ အကြည်ညိုဆုံး ဆောင်းပါးဖြင့် ပထမဆု ရရှိခဲ့သည်။
တိုင်းရင်းသူဂျာနယ် တွင်စတယ်လာတင့် အမည်ဖြင့် ဆောင်းပါးပြိုင်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရာ ပထမဆုရရှိခဲ့သော်လည်း ဂျင်းဖောမယ် ကလောင်အမည် တွင်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၂ခုနှစ်တွင် ယုဝတီဂျာနယ်၏ ယုဝတီဘွဲ့ ကိုရရှိ၍ ယုဝတီဂျင်းဖောမယ် ဟုအမည်တွင်ခဲ့သည်။
၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် မြန်မာပြည် အမျိုးသမီး ကလောင် အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် ထိုအဖွဲ့၏ အမြင့်ဆုံး ယုဝတီ ကလောင်ရှင်ဘွဲ့ ပေးအပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယုဝတီဂျင်းဖောမယ်သည် မြန်မာပြည် အမျိုးသမီး ကလောင်ရှင် အဖွဲ့ (၁၉၄၇-၁၉၆၂) နှင့် အထက်မြန်မာနိုင်ငံ စာရေးဆရာအသင်း (၁၉၄၆-၁၉၆၂) တို့တွင် အမှုဆောင် အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁၉၅၄-၁၉၅၆ ခုနှစ်များတွင် မန္တလေးမြို့ ကိုယ်ပိုင်ပုံနှိပ်တိုက် ဖွင့်လှစ်ကာ ရတနာပုံဂျာနယ်၊ ရွှေမန်းရုပ်စုံနှင့် ရွှေမန်းညနေ သတင်းစာများကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် အထက်မြန်မာပြည် စာရေးဆရာများ အသင်းတွင် နိုင်ငံခြား ဆက်သွယ်ရေး တာဝန်ခံနှင့် ဧည့်ခံရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်၌ပင် ရှမ်းပြည်နည် (အရှေ့ပိုင်း) နယ်စပ်ဒေသများသို့ သွားရောက်၌ မန်းမြေမှ မဲဆိုင်ကမ်းခြေသို့ နယ်စပ် ခရီးသွား ဆောင်းပါးရှည်ကြီးကို ယုဝတီဂျာနယ်၌ ရေးသားခဲ့သည်။
၁၉၆၂ တွင် ကာနယ်ဇင်း မဂ္ဂဇင်းတွင် ခင်တို့ တွက်တာ ကဏ္ဍ၌ အယ်ဒီတာ အဖြစ် ဆောင်ရွက်၍ လောင်းရိပ်မိသောပန်း ဝတ္ထုကို ရေးသားခဲ့သည်။
ရင်မှာပွင့်သော ပန်းကလေးများ (၁၉၆၅)
မြောက်စွန်းဒေသ ခရီးသည် (၁၉၆၆)
မူးမူး မေ့မေ့ မုန်းမုန်း (၁၉၇၁)
သေမင်းကိုမှ ချစ်မိသည် (၁၉၇၃)
မေတ္တာရင်ခွင်မှာ နားချင်သူပါ (၁၉၇၄)
မဟာနွယ်သစ်မင်းသခင် (ဒုတိယပိုင်း) (၁၉၇၅)
မဟာနွယ်သစ်မင်းသခင် (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း) (၁၉၇၆)
ကျွန်မအတွက် မြသရဖူ (၁၉၈၁)
၁၉၅၈-၁၉၆ဝ ပြည့်နှစ်များတွင် ယုဝတီဂျင်းဖောမယ်သည် ချစ်လို့ချစ်တယ်၊ တပ်ကြပ်ကြီးအောင်ထူး၊ ဂုဏ်ရိပ်မြိုင်ဝယ်၊ မေသရဖူ၊ ဤခေတ်ကြီးနှင့် အမီ စသည့်ရုပ်ရှင်ကားများတွင် ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးသူ အဖြစ် လည်းကောင်း ပါဝင် လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ မင်္ဂလာဒုံ တပ်နယ် ကလေးများ စာသင်ကျောင်း၌ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အလယ်တန်းပြ ဆရာမ အဖြစ်လည်း တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
၁၉၆ဝ ပြည့်နှစ်တွင် ကချင်ပြည်နယ်၊ ပူတာအိုခရိုင် မချမ်းဘောမြို့၌ ရုံးစိုက်သော နယ်ခြားဒေသ အုပ်ချုပ်ရေး ဌာနတွင် လက်ထောက် လူမျိုးစု သုတေသန ဌာနမှူး အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် မဖွံ့ဖြိုး မတိုးတက်သေးသော လူမျိုးစုများအကြောင်း သုတေသနပြုကာ မြဝတီမဂ္ဂဇင်း၊ ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း၊ ယုဝတီ ဂျာနယ်တို့တွင် ဆောင်းပါးများ ရေးသားခဲ့သည်။
၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် ရင်မှာပွင့်သော ပန်းကလေးများ ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ်ဖြင့် အနုပညာစာပေ ပထမဆု (အမျိုးသား စာပေဆု) ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ်တွင် မြောက်ပိုင်းဒေသမှ မြန်မာပြည်သားများ စာမူဖြင့် စာပေဗိမာန် စာပဒေသာ (ဒုတိယ) ဆု ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉⁠၉ဝ ပြည့်နှစ်တွင် နန်းမိုးခမ်း ကလောင်အမည်ဖြင့် အရင်ကလည်း သည်လိုပဲ ချစ်ခဲ့ကြပါတယ် စာမူဖြင့် မြဝတီစာပေပြိုင်ပွဲ ဝတ္ထုရှည် နှစ်သိမ့်ဆု ဆွတ်ခူးခဲ့သည်။ ၁၉⁠၉၁ ခုနှစ်တွင် မျိုးချစ်ဇာနည်မယ် ဝတ္ထုရှည်ဖြင့် မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ရှင်သန်ထက်မြက်ရေး စာပေပြိုင်ပွဲတွင် ဒုတိယဆု ရရှိခဲ့သည်။
ယုဝတီဂျင်းဖောမယ်သည် ၂၀၀၃ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၇)ရက်နေ့တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် ခင်ပွန်း ဗိုလ်မှူး အက်စ်လှထွေး (ငြိမ်း)၊ သမီး ဒေါ်ခင်မျိုးမြတ် (နန်းအိ⁠အိဇာ)၊ ဒေါ်ခင်မျိုးအေးနှင့် မြေး သုံးဦး၊ မြစ်တဦးတို့ ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
↑ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)၊ စာတည်းအဖွဲ့, ed. (စက်တင်ဘာ ၂၀⁠၀၈)။ နှစ်ဆယ်ရာစု မြန်မာ စာရေးဆရာများနှင့် စာစုစာရင်း။ စတုတ္ထတွဲ (ပထမအကြိမ် ed.)။ ရွှေဟင်္သာ စာအုပ်တိုက်။ |date= ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ယုဝတီဂျင်းဖောမယ်&oldid=714529" မှ ရယူရန်
၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၅၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၅၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။